FreeCAD muchinjikwa-chikuva yemahara imwe nzira kuAutoCAD | Linux Vakapindwa muropa
Kutaura nezvemhando idzi dzekushandisa kunounza ndangariro zhinji, nekuti muhafu yepamusoro ini ndaitakura nyaya ine zita rekuti technical Drawing, iyo yandakavenga, nekuti iwe waifanira kungwarira kugadzira marongero, pamwe neizvozvo ivo vakatanga isu kudzidzisa mashandisiro uye manejimendi yeAutoCAD iyo munguva yayo yanga yakanyanya kundiomera kudzidza.
Parizvino, handirangariri zvakawanda nezvekushandisa AutoCAD asi Paive panguva iyoyo pandakasangana naUbuntu uye yaive mune yayo Karmin Koala vhezheni uye naye Ini ndakawana yemahara imwe nzira kuAutoCAD.
FreeCAD chishandiso de yakavhurwa sosi multiplatform nerutsigiro rweWindows, Mac uye Linux yakagadzirirwa kunyanya kugadzirwa chaicho-kwehupenyu chinhu chero saizi. Parametric modelling inokutendera iwe kushandura zviri nyore dhizaini yako nekudzokera kune yako yemhando nhoroondo uye nekuchinja ayo parameter.
FreeCAD ine rutsigiro rwemhando dzakasiyana pakati payo patinowana STEP, IGES, STL, SVG, DXF, OBJ, IFC, DAE nevamwe vazhinji. MaharaCAD shandisa rezinesi re LGPL, kuti tikwanise kurodha pasi, kuisa, kugovera patsva uye kushandisa FreeCAD mahara,
Iko kushandiswa kuri zvichibva paOpenCasCade uye yakarongedzwa muC ++ uye mitauro yePython, inoitirwa simba geometry inotungamirwa yakanangana neinjiniya yemagetsi uye chigadzirwa dhizaini, asi zvakare inokodzera akasiyana siyana mashandisirwo muinjiniya, senge kuvaka kana zvimwe hunyanzvi hweinjiniya
FreeCAD inopa nzvimbo yebasa yakafanana neCATIA, SolidWorks, SolidEdge, ArchiCAD kana Autodesk Revit. Iyo inoshandisa parametric modelling matekiniki uye yakagadzirirwa modular software yekuvakisa, ichibvumira nyore kuwedzera kweanoshanda pasina kushandura musimboti weiyo system.
Como nevakawanda vemazuva ano 3D CAD modelers Iyo ine akawanda 2D zvikamu zvekudhirowa ma 2D maumbirwo kana kuburitsa zvakadzama dhizaini kubva kuiyo 3D modhi kugadzira 2D yekugadzira dhizaini, asi yakanangana 2D mifananidzo (seAutoCAD) haisi iyo yekutarisa, kana iri mifananidzo kana yehupenyu dhizaini (saMaya, 3ds Max, Blender kana Cinema 4D), nenzira iyi, nekuda kwekuchinjika kwaro kwakawanda, FreeCAD inogona kutanga kubatsira munzvimbo yakatambanuka pane iyo iriko parizvino.
Maitiro ekuisa FreeCAD paLinux?
Chirongwa inogona kuwanikwa mukati mezvakachengetedzwa zvekuparadzirwa kwakakurumbira, saka hazvidiwe kuti utorere kunobva kodhi yekodhi kuti unyore kunyorera pakombuta yedu.
Kana iri Debian, Ubuntu uye zvigadzirwa isu tinoisa FreeCAD nemirairo inotevera:
Kana iri Ubuntu isu tine repository iyo inotipa isu nguva dzose kuti ive neazvino vhezheni vhezheni potse ipapo, nekuti izvi isu tinongofanirwa kuzviwedzera ne:
Isu tinovandudza yedu runyorwa rwezvinyorwa ne:
Pakupedzisira, shandisa zvinotevera kuisa chirongwa ichi:
Kana iri Arch Linux uye zvigadzirwa, tinozviwana muAUR repositories:
Panguva ye Fedora, CentOS uye zvigadzirwa zvatinoisa iko kunyorera:
Para kuvhuraSUSE isu tinoshandisa unotevera kuraira:
Uyewo isu tine mukana wekuisa iyo application kubva kuapplication, yeizvi isu tinongofanirwa kurodhaunirodha kubva kune yayo yepamutemo webhusaiti, iyo chinongedzo ndeichi.
Waita kurodha pasi isu tinofanirwa kuchipa mvumo yekuuraya kurodha pasi faira
Uye pakupedzisira isu tinoisa FreeCAD nemurairo uyu:
Kamwe kuiswa kwacho kwapera, isu tinongofanirwa kutsvaga kunyorera mumenyu medu uye nekumhanya kuti titange kuishandisa.
FreeCAD ine budiriro isingatore nhanho yekukurumidza zvakanyanya kusiyana nezvimwe zvinoshandiswa, saka zvigadziriso zvayo zvinotora mwedzi mishoma kuti ibude.
Iko kunyorera kunowanzo kurudzirwa senge yemahara imwe nzira kuAutoCAD, kunyangwe kubva pakuona kwevakawanda ichine zvakawanda zvekuvandudza sezvo ichiri kushaya mamwe mabasa anoshandiswa neAccCAD.
Kana iwe uchiziva nezve chero yemahara AutoCAD imwe nzira, usazeze kuigovana nesu mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » FreeCAD muchinjikwa-chikuva yemahara imwe nzira kuAutoCAD
FreeCAD pane imwe nzira kune SolidWorks nekuti ine parametric dhizaini uye ine nhoroondo yezviito. AutoCAD haina kuitirwa izvozvo, asi yeCAD zvakajairika. Uye zvakare, FreeCAD ndeye BIM (Kuvaka Ruzivo Modeling), uye kune izvo, imba Autodesk yakagadzira Revit. Kune zvakare Allplan, gem rakatangira kunze kweiyo Unix masisitimu asi rakazopedzisira raenda kuWindows uye richidhura 9000 euros.
Imwe nzira yeAutoCAD ingave LibreCAD, QCAD uye kunyanya Drafight.
Zvingave zvinonakidza kutsanangura maitiro ekuumbiridza yazvino vhezheni yeFreeCAD kubva kunobva kodhi.
Mumwe mubvunzo, iwe unogona kuvhura Autocad mafaera mune chero awo? Ini ndiri mune kosi ine AutocaD chete. Ndakaiyedza, ne plug-in nezvose, zvinondiudza kwete
Raphael Moya akadaro
Drafight kana QCad inofanirwa kukwanisa kuvhura DWG. Kana zvisiri, saka zvinokurudzirwa kutumira iyo AutoCAD Fomati kuDXF.
Pindura kuna Rafael Moya
Haikwanise kuvhura maAccad mafaira (.dwg) muzvirongwa izvi (kunze kweDrafSight).
Export ivo seDXF.
Tech blogger vanofanirwa kuve vanoziva zvishoma kana zvasvika pakutaura kana kukurudzira mamwe mapurogiramu ezvimwe zviitiko senge dhizaini neinjiniya. CAD kana Computer Inobatsirwa Dhizaini inosanganisira akawanda maficha, kubva nyore 2D inotsanangudza kugadzira zvigadzirwa zvekugadzira uye gungano mirairo kune wekupedzisira mushandisi (technical Drawing) uye sketching, zvese izvo zvinogadzirisa zvinyorwa kana technical memory, kana iyo 3D modhi, inova iyo mainjiniya. uye chikamu chekuvandudza chezvikamu zvinoumba chigadzirwa. Muzviitiko zvese izvi tinotaura nezveCAD, asi izvo zviri zviviri zvakasiyana zvakasiyana nezvazvo. FreeCAD inotarisira kune yekupedzisira, saka kutaura nezvayo sekutsiva chirongwa chakagadzirirwa 2D dhizaini (AutoCAD) haina kusimba.
Vanofanira kutanga ipapo. Zvichida zviri nani kana matekinoroji mablogiki aine nyanzvi dzeCAD kuti vakwanise kutaura nemazvo pachinhu ichi.